Naya Post Nepal | काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिलेको गतिमा मतगणना हुँदा कति दिन लाग्छ?
काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिलेको गतिमा मतगणना हुँदा कति दिन लाग्छ?
काठमाडौं महानगरपालिकामा मतगणना कार्य निकै सुस्त भएको भन्दै आलोचना बढेको छ । हालसम्म महानगरपा लिकामा झन्डै साढे ६ हजार मतगणना भएको छ । काठमा डौं महानगरपालिकामा मतदानको भोलीपल्ट बैशाख ३१ गते बिहान ९ बजेदेखि मतगणना सुरु भएको थियो ।
मतगणना थालेदेखि हालसम्म २८ घण्टामा जम्मा ६ हजार ४ सय ७३ मत गणना भएको छ । यो हिसावले एक घण्टामा २ सय २८ वटा मत गणना भएको देखिन्छ । काठमाडौं महानगर पा लिकामा १ लाख ९१ हजार मत खसेको छ ।
अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मत गणक नै मतगणना कति पुग्यो भने पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको फेसबुक चेक गर्दै भनेर ब्यङ्ग्य गरेका छन् ।
कतिपयले किताबको पाना पल्टाएको आधारमा आफूलाई पुरै किताब कण्ठ हुने भनेर भ्रम फैलाएका विजय शाहीलाई बोलाउनुपर्ने भन्दै ब्यङ्ग्य गरेका छन् ।
२०७९ जेष्ठ १, आईतवार प्रकाशित0Minutes 645 Views